Shiinaha Antminer T19 - 84THs warshad iyo soosaarayaasha | Tianqi
la xiriir maanta!
Qalabka Macdanta la Adeegsaday
Daawaha: 84TH / s
Taariikhda rarida: 21-30, Jun. 2020
Crypto Algorithm / Qadaadiic
Awooda darbiga, Watt
3150 ± 5%
Waxtarka awoodda derbiga @ 25 ℃, J / TH
37.5 ± 5%
Hashrate & Awood
Qalabka korantada ee korantada AC, Volt (1-1)
Awood koronto galinta AC Soo noqnoqodka Range, Hz
Qalabka korantada AC Input current, Amp (1-2)
Habka isku xirnaanta
Cabbirka Miner (Dherer * Baaxad * Dherer, xirmo w / o), mm (2-1)
400 * 195.5 * 290
Cabbirka Miner (Dherer * Ballaaran * Dherer, oo baakad leh), mm
Miisaanka saafiga ah, kg (2-2)
Miisaanka guud, kg
Heerkulka keydinta, ℃
Qoyaanka hawlgalka (aan isku ururin), RH
Qoyaanka hawlgalka, m (3-1)
Hore: Antminer T17 + 58THs
Xiga: Antminer S9 SE-16THs
1. Qeexitaannada iyo macluumaadka kale ee Antminer T19 waa sida lagu sheegay Guudmarka qaybta.
Raritaanka qaybtani waxay ku bilaabmi doontaa markabkii ugu horreeyay ee markabka la bixiyo ee ugu horreeya ee amarrada ay Bitmain heshay lacag bixin buuxda. Waxaan kugula talineynaa inaad ka feejignaato siyaasadaha nadiifinta kastamka ee deegaankaaga oo aad u sii diyaar garowdo waqtiga ka hor si looga fogaado wixii dib u dhigista kastamka ah ama kharashyada lama filaanka ah.
Fadlan si naxariis leh u fiirso in korontada ay qayb ka tahay T19.
Fadlan si naxariis leh u fiirso in danab gelinta loo baahan yahay ee T19 ay tahay 220V.
Si looga hortago kaydinta iyo in la hubiyo in shakhsiyaad iibsadeyaal badani ay ka iibsan karaan macdan qodayaasha, waxaan u dejinnay xadka 2 macmiil halkii qofba.
Fadlan xulo cinwaanka saxda ah ee rarka kahor intaadan gudbin amarkaaga. Dufcadan, cinwaanka dhoofinta lama beddeli karo markii amarka la gudbiyo.
Shixnadaha loo dirayo Mareykanka, sida ku cad xukunka NY ee N297495, mashiinka macdanta waxaa lagu sifeeyay hoosta 8543.70.9960 oo ay ku jiraan 2.6% canshuur iyo 25% dheeraad ah oo lagala soo degayo sida waafaqsan shuruudaha iyo xaaladaha Sino-US.
Shixnadaha Jarmalka, fadlan la soco inaan leenahay macaamiil fara badan oo Jarmal ah oo la kulmay dhibaatooyinkii nadiifinta kastamka markii shixnadaha loo soo marsiiyay DHL. Waxaad rabi kartaa inaad tixgeliso macluumaadkan ka hor intaan la go'aaminin side xamuulka. Haddii ay dhacdo dib-u-dhac kasta oo soo noqnoqod ah ama soo-celinta shixnad ay sabab u tahay rarka DHL, Bitmain mas'uul kama noqon doonto.
Fadlan halkan guji si loo tixraaco dhammaan shahaadooyinka alaabada. Fadlan cilmi baaris ku samee shuruudahaaga gaarka ah ee deegaanka ka hor intaadan ka iibsan Bitmain. Xaaladda dib u dhac kasta oo caado ah ama soo noqoshada shixnad sababtoo ah la'aanta shahaadada, Bitmain mas'uul kama noqon doonto.
Si loo hubiyo xaqiiqada, tayada sare iyo caymiska buuxa ee alaabooyinka aad naga iibsato, Waxaan si xoogan u soo jeedineynaa inaad ka iibsato websaydhkayaga rasmiga ah (www.bitmain.com) anaguna waxaan kaliya masuul uga noqon doonnaa alaabada laga soo iibsado degelkeena rasmiga ah. Fadlan garwaaqso inaynaan haysan wax qaybiyaha saddexaad iyo kuwa wax iibiya oo idman gobol kasta ama waddan kasta. Uma oggolaan doonno inay badeecadeenna ku iibiyaan shaqsiyaad taleefan, emayl ama qaabab kale. Waxay noqon kartaa khiyaano haddii aad amarka siiso qof sheeganaya inuu yahay wakiilka rasmiga ah ee iibinta Bitmain ama u qaybiye email ama Skype ama degello kale oo aan ka ahayn degelkeena rasmiga ah (www.bitmain.com). Dhacdo kasta masuul kama noqon doono wixii khasaaro ama waxyeelo ah ee ka dhasha khiyaanooyinka dhinacyada saddexaad. Shuruudaha iyo shuruudaha alaabadayada iibinta ee ku taal bogga rasmiga ah ayaa ah nooca kaliya ee qasab ku ah mana ku dhici doonno dhacdo kasta oo la mid ah shuruudaha la doorbido ee ay bixiyaan qaybiyaha kale ee rukhsad iyo iibiye kale ah.
Sawirada la soo bandhigay waxaa loogu talagalay tixraac kaliya, nooca ugu dambeeya ee rarka ayaa adkaanaya.
Fadlan ogow in asalka mashiinka macdanta ee calaamadda la cusbooneysiin doono sababtoo ah hagaajinta warshadda.
13. Waxaa aad loogu talinayaa in loo isticmaalo Antpool (www.antpool. Com) iyo BTC.com (https://pool.btc.com) adeega macdanta.
(1-1) Digniin: Danab gelinta qaldan waxay u badan tahay inay waxyeelo u geysato macdanta
(1-2） Xaaladda ugu badan: heerkulka 40 ° C, joog sare 0m
(1-3) Laba fiilooyin AC ah, 10A halkii silig
(2-1） Oo ay ku jiraan cabbirka PSU
(2-2) Oo ay ku jiraan culeyska PSU
(3-1) Marka macdanta loo isticmaalo meel sare oo ah 900m ilaa 2000m, heerkulka ugu sareeya ee hawlgalka ayaa hoos u dhacaya 1 ℃ koror kasta oo 300m ah
1. BTC (Bitcoin), LTC (Litecoin), BCH (Bitcoin Cash), USDT (omni) iyo USD ayaa laga aqbalay qaybtan.
BCH halkan waxaa loola jeedaa BCHABC. Bixinta waa inay ku jirtaa BCHABC. Bixin kasta oo lagu sameeyo BSV (BCHSV) ama BTC ama qadaadiic kale waa mid aan dib loo soo celin karin. Bitmain mas'uul kama noqon doono wixii lumay.
2. Qiimaha dhoofinta, khidmadaha kastamka iyo canshuuraha (haddii ay jiraan) kuma jiraan qiimaha tafaariiqda ee kor ku xusan.
3. Fadlan buuxi tirada aad rabto, cinwaanka dhoofinta oo dooro adeeggaaga dookha ah ee aad doorbideyso intaad amreyso amar aad ku baraneyso qiimaha dhoofinta cinwaankaaga dhoofinta.
4. Bixinta Gaarka ah: Kadib amar la soo gudbiyey, codsi ah in la joojiyo amarka, dib loogu celiyo qayb kasta oo ka mid ah qaddarka la dalbaday ama loo beddelo shaygii (alaabadii) la dalbaday oo loo beddelay alaabooyin ama qaybo kala duwan oo ka mid ah (MAQAADI DOONO) waxaa qoray Bitmain. Waxaan kugula talineynaa inaad wax iibsato wax uun ka dib tixgelinta.
5. Si aad jawaab degdeg ah uga hesho kooxdeena wixii amar ah ama weydiimo la xiriira iibka ah fadlan codsi halkan ku soo gudbi.
6. Qiimaha halbeegga iyo qiimaha guud ee badeecada, inta aad bixineyso waa in lagu wada qoro dollarka Mareykanka, iyadoo aan loo eegin lacagta aad u adeegsaneyso bixinta. Heerka sarrifka ee u dhexeeya US dollars iyo cryptocurrency waa in la ansixiyaa iyadoo la raacayo sharciyada hoose:
• Haddii ay dhacdo inaad bixisid Amarkaaga meeleysan oo ansax ah oo aan weli si buuxda loo bixin, sicirka sarrifka u dhexeeya doolarka Mareykanka iyo cryptocurrency ee lagu hagaajiyay Amarka la soo saaray ayaa la qaadan doonaa;
• Haddii kale, sicirka sarrifka waqtiga dhabta ah ee u dhexeeya US dollars iyo cryptocurrency lagu soo bandhigay Bogga markii la bixinayo waa la ansixinayaa.
Fadlan HA SIIN amarkaaga qof ama qof kasta oo sheeganaya inuu yahay wakiilka rasmiga ah ee Bitmain e-mayl ama Skype. Waxay noqon kartaa been abuur amarkaaga la xaqiijiyayna waligiis lama geyn karo kiisaska noocaas ah. Bitmain mas'uul kama aha mana bixiso nooc magdhow ah kiisaska noocaas ah.
FIIRO GAAR AH: Qiimaha mashiinada macdanta cryptocurrency waa in si joogto ah loogu hagaajiyaa iyadoo la waafajinayo doorsoomayaasha sida sicirka sarrifka ee loo yaqaan 'fiat', dhibaatada shabakadda cryptocurrency, ama dhibaatada la filayo inay kororto. Codsiyada soo celinta ee ku saleysan isbeddelada qiimaha LAGAMA maamuusi doono.
1. Dammaanad 180-maalmood ah ayaa la bixiyaa laga bilaabo taariikhda rarka. Si looga faa'iideysto damaanad qaadashada tigidhka dayactirka waa inuu ku sameeyaa macaamilka websaydhka Bitmain. Xirxirida xad dhaafka ah ee macdanta ayaa isla markiiba tirtiri doonta damaanada.
2. Damaanad-qaadku wuxuu khuseeyaa oo keliya iibsadaha asalka ah ee si toos ah uga iibsaday mashiinka Bitmain. Marka macdanta dib loo iibiyo dammaanad qaadka dammaanad qaadka wuxuu noqonayaa mas'uuliyadda iibiyaha.
3. Dhammaan iibku waa kama dambeys. Wax lacag celin ah lama bixin doono. Macdan qodayaasha cilladaysan waa la dayactiri karaa bilaash haddii ay hoos yimaadaan nidaamka damaanadda Bitmain. Muddada dammaanadda ka dib, mashiinnada waa la dayactiri karaa iyadoo kharashka qaybaha iyo shaqada la bixinayo.
4. Dhacdooyinka soo socda ayaa burinaya damaanad qaadka:
a. Macaamiilku wuxuu ka saaraa / beddelaa wax kasta oo agabkiisa ah isaga oo aan ogolaansho ka helin Bitmain marka hore;
b. Khasaaraha ka dhasha korontada oo liidata, hillaaca ama korantada oo kororta;
c. Qaybaha gubtay sabuuradaha xashiishka ama jajabyada;
d. Waxyeellada macdanta / looxyada / qaybaha ay sabab u tahay quusidda biyaha ama daxalka deegaanka qoyan awgeed.
5. Dhammaan dayactirka ama RMA, inta lagu guda jiro damaanad iyo in kale, macaamilku waa inuu ku soo celiyaa qeybaha cilladaysan kharashkiisa / keeda kadib markuu furo tigidh taageero oo uu dhib ka helo tilmaamaha Bitmain.
6. Bitmain waxay dabooli doontaa kharashka dhoofinta marka ay soo direyso cutub beddelaad ah muddada damaanadda.
7. Haddii aad ogaato inay jiraan waxoogaa kululaado dabacsan markii aad hesho macdanta, fadlan noogu soo sheeg emayl info@bitmaintech.com 3 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda baakadka la helay sida ku cad bogga UPS / DHL / FEDEX.
8. Bitmain ayaan wax masuuliyad ah iska saareynin ama magdhabeynin wixii khasaaro ah ee ka yimaada waqtiga dhimista oo ay keento dib u dhaca ku yimaada gaadiidka sababo la xiriira qaababka caadada u ah ama sababo kale.
Fadlan akhri Shuruudaha & Xaaladaha Bitmain ee ah liistada dhammaystiran ee shuruudaha iyo shuruudaha khuseeya dhammaan amarrada lagu soo rogay Bitmain.com
crypto macdanta asic
macdan qodato iib ah
isticmaalay riigga macdanta
loo adeegsaday qalabka loo yaqaan "crypto"
Muuqaalka Qiimaha Muuqaalka Muuqaalka Maya ....
Antminer Z15 （APW7 ayaa lagu daray）
Xirfadlaha sanduuqa macdanta macdanta iyo iibiyaha mashiinnada macdanta gacanta labaad oo qiimahoodu aad uga hooseeyo qiimaha suuqa
2020, waxaa laga yaabaa inuu yahay sanadkii ka soo horjeedka Seeraar
Waa maxay dhab ahaan xannibaadda?
Maxay Bitcoin u qaali tahay? Waa maxay isweydaarsiga Bitcoin?
300 Mitir East of East Gate of Long Dong Mine and Xuji Highway, Isgoyska Xaafada Zhendong, Longgu Town, Pei County, Xuzhou City.
crypto macdanta asic, loo adeegsaday qalabka loo yaqaan "crypto", weelka btc, weelka bitmain, weelka antminer-ka, weelka antbox,